Ọrụ Ndị Ahịa na Nkwado Ndị Ahịa
Ndị Ahịa na ndị Ahịa Nkwado
Satọde, 5 Juun 2010 Saturday, October 17, 2015 Douglas Karr
Enwere nsogbu na ụlọ ọrụ na ntanetị. Anyị na-eji usoro ọrụ ndị ahịa na nkwado ndị ahịa eme ihe change mana ha na-eche ihe abụọ dị iche. Ọtụtụ mgbe, nzukọ ịntanetị etinyela ego na ndị otu nkwado na-akwụ ụgwọ maka nzukọ na-anaghị akwụ ụgwọ.
N'abalị a, m na-ede akwụkwọ maka usoro maka ikesa ndị ahịa anyị na chọrọ ijide n'aka na ọdịiche ọrụ na nkwado. Dịka nzukọ ọrụ, ibu ọrụ anyị bụ iso ndị ahịa kwukọrịta okwu nke ọma ma nyefee ihe ha rịọrọ. Anyị enweghị ike inye nkwado, n'agbanyeghị. Anaghị anyị arụ ọrụ ịkwado ndị ahịa, enweghịkwa ego zuru ezu na nkwekọrịta anyị na ndị ọrụ ndị otu nkwado. Ugbu a anyị na-enye ndị ahịa ọrụ na United Kingdom, Canada na gafee United States… nke ahụ bụ nnukwu efefefe iji nweta ndị mmadụ.
M na-echeta mgbe m na-arụ ọrụ na Kpọmkwem Ngwaọrụ na anyị ga-enwe ndị ahịa na-akpọ anyị maka nsogbu na Outlook na-enye ozi ịntanetị n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ naanị nsogbu anyị n'ihi na anyị akwụ ndị ahịa ụgwọ bụ ndị tụrụ anya nkwado dịka akụkụ nke ọrụ ndị ahịa ha. Onye ahịa enweghị ike ịkpọ Outlook agaghị edozi ya, agbanyeghị). Ọ amanye ExactTarget ume ogbenye HTML-nzuzo na-arụ ọrụ gburugburu okwu… na-aga n'ihu na-akwado mbipụta na ha n'ezie enweghị achịkwa!
Sọftụwia dị ka ụlọ ọrụ ndị ọrụ kewara - ọtụtụ n'ime ha na-enye nkwado maka otu ihe merenụ, ụfọdụ na-enye nchịkọta nkwado, ndị ọzọ anaghị enye ya ma ọlị. Oge ụfọdụ, ụlọ ọrụ na-etinye ego na Sọftụwia dị ka Ọrụ naanị ka ha chọpụta na ọ nweghị onye ga-akpọ mgbe ọ na-apụ. Nke ahụ bụ ọnọdụ dị elu iji tinye ụlọ ọrụ.
Ugbu a, anyị na-eche ihu free ngwa - Google Analytics, Youtube, WordPress, Twitter na Facebook - na ha niile na-adị ngwa ngwa dị egwu na azụmaahịa anyị. Ndị a niile bụ ụlọ ọrụ na-enye nnukwu ọrụ… mana enweghị ụdị nkwado ọ bụla (WordPress nwere VIP, Google kwadoro ndị ọzọ). Usoro anyị na-eto eto na ndabakọ na mgbagwoju anya ka anyị na-aga n'ihu na-etinye ọnụ na iwekọta ọdịnaya anyị. Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ihe niile adabaghị?
IMHO, ọ bụ naanị oge tupu ụlọ ọrụ ndị a amanye inye nkwado. Ngwa Google, dịka ọmụmaatụ, na-enye nkwado na $ 50 kwa onye ọrụ kwa afọ. Nke ahụ bụ ezigbo azụmahịa ma ejiri m n'aka na ọ na-egbochi iyi egwu iwu ọ bụla nke Google nwere ike ịnwe ma ọ bụrụ na ha hapụrụ ụlọ ọrụ dị elu ma kpoo na-enweghị email ọ bụla maka otu izu ma ọ bụ abụọ.
Nkwado ndị ahịa dị mkpa maka ọrụ dị oke mkpa nke ọrụ. Ọ bụ ya mere enwere ụlọ ọrụ dịka Webtrends n'elu Google Analytics, Kpọmkwem Ngwaọrụ n'elu Lyris, na Squarespace n'elu WordPress. O di nwute, enweghi otutu nhọrọ ma abia na Youtube, Twitter na Facebook - olu ha na-ekesa bu ihe n’eme ka ha baa n’ime ahia.
Abụ m nnukwu onye ofufe nke teknụzụ mepere emepe, mana ọ ga-amasị m ịhụ ndị otu a gbasaa onyinye nkwado ha… ọbụlagodi na ọ pụtara na ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ maka ya. Kedu ihe ị chere?
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa nkwado